व्यावसयीको हक, हित, साहस र हिम्मतका साथ चुनावी मैदान छु : विनोद पौडेल – Saurahaonline.com
व्यावसयीको हक, हित, साहस र हिम्मतका साथ चुनावी मैदान छु : विनोद पौडेल
सौराहा अनलाइन | २०७६, २८ पुष सोमबार
चितवन : उद्योग बाणिज्य संघ चितवनको ५३ औँ साधारण सभा तथा अधिवेशन आजदेखि सुरु हुदैछ । यहि अधिवेशनमा फेरि एक पटक युवा व्यवसायी विनोद पौडेलले सदस्यका रुपमा उम्मेदवार दिएका छन् । पूर्वी चितवन रत्ननगर नगर निपनीचोकमा घर भएका पौडेल सरल र सहयोगीमनका धनी छन् ।
सानै उमेरदेखि व्यवसायमा अब्बल बन्नुपर्छल भन्ने सोचका साथ उनी कम्प्युटरको व्यापार सुरु गर्दै व्यवसायी जीवनमा होमिएका थिए । करिब १५ बर्षदेखि ब्यवसायमा संलग्न उनी चितवनका आधा दर्जन बढी संघसंस्थाको नेतृत्व गर्न समेत सफल समेत भएका छन् । उनी हक्की र निडर स्वभाव पनि छ । उनले ए वान कम्प्युटर सप्लार्यस, शुभ श्री पोल्टीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । क्यान चितवनको सल्लाहकार, क्यान प्रदेशको निर्वतमान उपाध्यक्षसगैँ नमस्ते बिहानी साप्ताहिक र सौराहा अनलाईन डिजिटल पत्रिकाका निर्देशक पनि हुन् ।
ब्यवसायीहरुलाई परेको बखत जुनसुकै बेला र जस्तोसुकै सहयोग गर्न सक्ने उनी ब्यवसायीहरुको हक र हितका लागी आफनो उम्मेदवारी रहेको बताएका छन् । दर्जनौ सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध भएर समाजसेवामा समेत क्रियाशिल बनेका उनी सदस्यका बलिया उम्मेदवार हुन् ।
आफ्ना चुनाव एजेण्डाका आधारमा जित्ने र आफना मुद्धाहरु बलियो र ब्यवसायीको हितमा भएका कारण चुनाव जित्नेमा आफु ढुक्क रहेको उनले बताए । यहि क्रममा पौडेलसगँ गरिएको कुराकानी :
चुनावको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?
म एउटा व्यावसायी प्रतिनिधित्व गरेर चुनावमा जादैछु । व्यवसायीक हक हितका लागि काम गर्न र व्यावसयीका समस्या समाधान गर्न सक्छु भनेर मैले उमेद्धारी दिएको हो । चुनौती, अवसर र अनुभवको आधारमा म चुनाव लड्दै छु । म व्यावसयीको हक हितमा काम गर्न सक्छु भन्ने साहस र हिम्मतका साथ चुनावको तयारी गर्दै छु ।
तपाईले चुनाव जितेपछि व्यावसयीक बिकासका लागि कस्ता काम गर्नु हुन्छ ?
पहिलो काम म करको समस्या समाधान गर्छु। सरकाले लगाएको करको बिषयमा कतिपयले व्यावसायी थाहा नपाएको अवस्था छ । त्यो सम्बन्धी विज्ञ ल्याएर तालिम गराउने मेरो सोँच छ । उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव जिते लगत्तै व्यवसायीका लागी बिशेष तालिमको व्यवस्था गराउँछु ।
व्यावसयीहरूले तपाँइलाई नै मतदान गर्नु पर्ने खास कारण ?
व्यावसयीक हकहित का लागि काम गरेको छु । बिभिन्न संघ संस्थामा लामो समय रहेर काम गरेको अनुभब छ । मैले काम गर्न सक्छु भन्ने कुरामा व्यावसायीहरु आसावादी हुनुहुन्छ त्यसैले मलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको छु ।
अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा तपाई के कुरामा अब्वल हुनुहुन्छ ?
म जुन काम गर्छु त्यसको रिजल्ट चाहान्छु । म आफै पनि एक व्यवसायी हुँ । त्यसले गर्दा जुन कुरा मलाई थाहा छ त्यो कुरा राम्रो संग कार्यानयन गर्न सक्छु । मैले जे काम गर्छु त्यसमा म आफ्नो स्वार्थ हर्दिन विशुद्ध व्यावसयीक हितका लागि काम गर्छु । त्यसैले प्रतिस्पर्धी भन्दा म नै व्यावसयीका लागि उपयुक्त छु भन्ने लागेको छ ।
अन्त्यमा आम व्यावासयीलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
यो अवधिमा हामी आम व्यवसायीहरुले महसुस गर्नै गरी काम गर्छौ। तपाईहरुले हामिलाई त्यो मौका दिनु हुन्छ भन्ने कुरामा बिश्वस्त रहेको छु । अन्त्यमा मलाई अत्याधिक बहुमतले बिजय गराउन सबै व्यवसायीहरू सँग आग्रह गर्दछु ।
पोखरा ६ मा कांग्रेसले नेपालको नयाँ नक्सामा दीप प्रज्ज्वलन गरेर गणतन्त्र दिवस मनायो २०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार
प्रिमियर लिगका बाँकी खेलहरु जुन १७ देखि सुरु हुने २०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार
रुकुम पश्चिम नरसंहारको पोखरामा विरोध २०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार
कैलाश गाउँपालिकाको कार्यालयमा आगलागी, सबै कागजपत्र जलेर नष्ट २०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार
चितवनको इच्छाकामनाबाट ४० देशमा ८ सय ३६ जना वैदेशिक रोजगारीमा २०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार
लकडाउनको मारमा महानगर फलफुल तथा तरकारी बजार र किसान २०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार
पोखरा ६ मा कांग्रेसले नेपालको नयाँ नक्सामा दीप प्रज्ज्वलन गरेर गणतन्त्र दिवस मनायो
कास्की : नेपाली कांग्रेस पोखरा ६ टोल समिति ४ ले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपालको नयाँ नक्सामा दीप प्रज्ज्वलन.....
रुकुम पश्चिम नरसंहारको पोखरामा विरोध
कैलाश गाउँपालिकाको कार्यालयमा आगलागी, सबै कागजपत्र जलेर नष्ट
पर्साको ठोरीमा भारतीय पक्षको आतंक
सरकारकाे बजेटलाई भरतपुर महानगरद्वारा स्वागत
रत्ननगरकाे खगेरी खोलामा डुबेर १ बालकको मृत्यु
नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा डिएसपीकाे सरुवा र पदस्थापन ( सुचीसहित)
समाजवादको बाटो पक्रनेगरी बजेट आएको छ : प्रचण्ड
काठमाडौंमा ३ सय शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाइने
रेलमार्ग बनाउन ८ अर्ब ६६ करोड
E-mail: saurah[email protected]